musha > Travel Europe > 7 Most Affordable Places To Travel In Europe
Mamwe maonero akanaka kwazvo muEurope akakosha uye ari nyore kusvika. Kunyange zvakadaro, a trip to Europe can get quite expensive if you don’t plan in advance. While most European capitals will stretch your travel budget, kune nzvimbo dzinoverengeka dzekufamba muEurope dzinokwanisika chose. Pamusoro pedu 7 nzvimbo dzakawanda dzinodhura dzekufamba muEurope dzine bhajeti-dzakanaka uye hadzi pfuure ma50 euros pazuva nemunhu.
Aya matombo akavanzika haawire kure kumashure mukunaka uye mashiripiti, tevere maguta akaita seParis neBerlin.
1. Most Affordable Places In Europe: Cologne, Jerimani
Ipo Germany inodhura, Cologne ndeimwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekushanyira muEurope. Kubva pabhajeti-inoshamwaridza pekugara kune emahara emahara mamaki uye zvifambiso zvekufambisa, Cologne ndeyechokwadi a kuputsa kukuru kweguta sarudzo kana iwe uri kufamba wega kana kuronga rwendo rwemhuri rweEuro.
Iri guta reGerman musha weKolsch doro, saka unogona kuravira zvinonaka zveGerman ne € 1.30 chete. Hapana chinhu chakanakisa sekunakirwa pint pamahombekombe erwizi Rhein, mushure mekuswera muguta. Ive neshuwa yekufamba kuburikidza neFicshmarkt yekuposita-senge inovhenekera nedzimba dzemavara uye ramba uchienda kuOld Town, Altstadt.
Pamusoro pe, iyo inonyanya kuzivikanwa muGerman, inoshamisa Cologne kereke yakasununguka kushanyira. Iyo Gothic dhizaini, pendi magirazi mahwindo, uye maonero erwizi ari epic. Kana iwe uchida hunyanzvi, ipapo Cologne ane mamiziyamu makuru kana unonakidza hunyanzvi hwemumugwagwa muEhrenfeld. Iyi nharaunda ndiyo hudyu uye inoyevedza chikamu cheCologne, iyo-enda-kuenda-kunzvimbo yekofi uye mazambiringa.
Sezvauri kuona Cologne iguta rinoshamisa-rine hushamwari kuenda kuEurope. Pamusoro pazvose, chakanakisa nezvazvo kufambisa kwayo kwakaringana uye kutengeka. Kutakura kweGerman, njanji njanji, uye tramu yakanyatsogadzikana uye inoshanda, saka inokusevha yakawanda nguva uchifamba famba. Kuwana zuva nezuva kana vhiki nevhiki chitima kupfuura inzira yakanaka yeku kuponesa mari pavaifamba.
Berlin kuenda kuAachen Chitima Mitengo
Frankfurt kuCologne Chitima Mitengo
Dresden kuCologne Chitima Mitengo
Aachen kuCologne Chitima Mitengo
2. kushandiswa, Bherujiyamu
Waffles yekudya kwemangwanani uye iwe wagadzirira kuongorora zvese 80 Mabhiriji uye gungwa rerudo, Minnewater. Bruges ndeye rakanaka medieval guta muBelgium uye imwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekushanyira muEurope. Kubva pane yakatanhamara nhamba yema castles kusvika ku kukwira chikepe mumigero, kune zvakawanda zvinodhura zvinhu zvekuita muBruges, kukwira chitima kubva kuBrussels.
Kana iwe uchida kusvetuka zvishoma, saka iwe unofanirwa kunyatso shandisa nguva uye chikamu chebhajeti rako rezuva nezuva pane chokoreti. Tarisa chiratidzo 'chakaitwa nemaoko' chiri 50 wepa chokoreti zvitoro muguta kune yakanakisa Belgium chokoreti.
Kukura kudiki kweBruges uye kuronga kweguta zviri nyore kupamhidzira netsoka, saka haufanire kupedza nguva uchifambisa. Saizvozvo, nzira huru yekuongorora guta uye kudzidza nezve tsika nemagariro aro nekubatana nerwendo rwemahara rwekufamba. Nenzira iyi iwe unogona kuwana ese emukati matipi pane anodhura maresitorendi, chirangaridzo kunotenga, uye nzira yakanakisa yekushanyira zvinokwezva zvikuru.
3. Most Affordable Places In Europe: Czech Krumlov, Czech Republic
Czech Republic ndiyo imwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekufamba muEurope, uye nekudaro guta rakanaka reCesky Krumlov riri pane yedu runyorwa. Iri dhorobha rine mavara vashanyi-vane hushamwari uye pamusoro pezvose, bhajeti-inoshamwaridzika. Iwe uchaona zviri nyore kwazvo kuti uzviongorore uye uzviite wega muCzech chikafu, kunyorera doro, uye kuona nzvimbo usingashandisi chero chinhu kubva kubhajeti rako rekufamba.
Kutanga kwazvose, kudya kunze kwakachipa kwazvo, uye iwe unogona kuwana makuru emamenyu menyu ayo anopa anotangisa, zvakakosha, uye doro remitengo inosetsa. Doro rakachipa kupfuura mvura pese paCzech Republic uye richiisanganisa nemaseji akakurumbira akasanganiswa, wazviwanira kudya kwemanheru kukuru.
Guta iri zvakare kumusha kunoshamisa castle uye mapindu akasununguka kushanyira, uye kana iwe uchida kukwira kumusoro kune epic maonero, ipapo mari yekupinda mushongwe iri shoma pane 5 Euro. Imwe sarudzo huru yekuongorora guta iri nekubatana nerwendo rwekufamba rwemahara uye kusangana nevamwe vafambi kana bhuku a Cesky Krumlov rakavanzika guta kufamba rwendo zvechikwata. Nenzira iyi iwe unogona kuwana zvakavanzika zveguta, ngano, uye matipi ekuti uve nerwendo runoshamisa kuenda kune yengano nyika.
Hungary ndiyo imwe yenyika dzakachipa kwazvo muEurope, uye kune zvakawanda zvekuona kupfuura Budapest. Eger iguta rinoshamisa, nezvitubu zvinopisa, Bukk Hungary's national Park, uye nzvimbo dzakanaka dzekushanyira. Zvese izvi zvishamiso zviripo pasina kukanganisa bhajeti rako rekufamba.
Eger nderimwe remaguta ane mukurumbira muHungary uye iri musha kune waini tsvuku inonaka, iri pakati pemakomo eBukk. Maonero akanaka maonero echisikigo anogadzira iyo chaiyo mamiriro e waini anoravira mushure mezuva rakakura rekufamba musango munzvimbo yakanaka yeBukk uye uchizorora mune zvitubu zvepanyama. Sezvo Hungary iri musha kune mamwe ematsime ezvakanyanya kunaka muEurope, soak kumusoro mumhepo inopisa ndeyechokwadi mhedzisiro.
Eger yakakwana kune yekuzorora spa svondo kubva kuBudapest. Sarudzo pakati pezuva-rwendo kana kuzorora kweguta kubva kuBudapest zvese zvako, asi tinokurudzira kushandisa kanenge vhiki refu muiri guta rinonakidza.
5. Most Affordable Places In Europe: Cinque Terre, Itari
Dzimba dzakajeka, ndakagara padhuze neiyo yakanaka Sentiero Azzurro, gadzira Cinque Terre chivakwa chekuItaly kushamisika. Cinque Terre ndeimwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekufamba muEurope neItaly. Hapana chinofananidzwa nekunzwa kwekufamba zvakanaka uye nekukurumidza pakati 5 nzvimbo dzinoyevedza. Iyi nzira yekufamba inokusevha yakawanda nguva nemari neCinque Terre chitima kadhi.
Nezve pekugara, kuita La Spezia chako chigadziko cherwendo iyi sarudzo huru. Iri guta rakanaka rechiteshi chengarava reItari rine mahotera akawanda uye mahotera aunosarudza.
Cinque Terre inobatikana zvakanyanya uye inodhura mumwaka wakakwira. saka, zviri nani kushanyira pakati paApril-Chikumi yezhizha kana Gumiguru-Mbudzi kuyemura runako rwayo rwepanyama mukudonha.
La Spezia kuenda kuRiomaggiore Chitima Mitengo
Florence kuenda kuRiomaggiore Chitima Mitengo
Modena kuenda kuRiomaggiore Chitima Mitengo
Livorno kuenda kuRiomaggiore Chitima Mitengo
Kumba kuMozart, Mapurani eBaroque, Schonbrunn Palace, uye iyo maze yakasvibira, Vienna ndeyaMwari. Nepo vamwe vangati zvine mutengo, rwendo kuenda kuguta reAustria runogona kuitika uye harungawire kure nebhajeti rekufamba zuva nezuva mune mamwe maguta eEurope sePrague kana Budapest. Guta rine vashanyi-vane hushamwari, saka unogona kuyemura vakapfuma tsika, chili, uye runako rwehupenyu hweViennese, usingakanganise mari yako yeupenyu.
Guta guru reAustria nderimwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekushanyira muEurope, nekutenda kune ayo evashanyi-anoshamwaridzana madhiri. Semuyenzaniso, iyo Vienna Kadhi ichakuwanira iwe yakanyanya kutapudzwa paMuseum, zvinokwezva, uye mabhazi. Pamusoro pe, iwe unogona kuravira yakanakisa Viennese strudel mune mamwe maVienna anoshamisa maresitorendi, panguva yekudya kwemasikati. Mahotera mazhinji nemakamuri anopa iyo 2-3 kosi yakamisikidzwa menyu yepasi pe € 10.
Kwehusiku kunze kwetsika nemimhanzi, maresitorendi mazhinji ane emahara emitambo mimhanzi. asi, kana iwe uine maziso ako akatarisa husiku pane yakakurumbira opera, ipapo unofanirwa kuve nemeso ako pakuwana matikiti ekumira kuita, sezvo ivo vari asingadhuri zvakanyanya kupfuura echinyakare opera matikiti.
7. Most Affordable Places In Europe: Normandy, Furanzi
Mahombekombe egoridhe, ngano dzaJoan weArc weRuen, chitsuwa cheMont St. Michel monastery, ingori mashoma ematombo anokosha muNormandy. Iyi nharaunda yakanaka irwo rwemaawa maviri rwendo kubva kuParis, asi kusiyana neguta guru reFrance, ndiyo imwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekufamba muFrance.
Normandy inonyanya kuzivikanwa nekumhara mabhishi kubva kuWWII. zvisinei, imusha kumawere kuEtretat, yemakomo mahombe ematombo, kushamisika kunoshamisa kwechisikigo. Scenic Giverny musha waigara Claude Monet uye akapenda maruva ane mukurumbira ndiyo imwe nzvimbo isingarasikirwe newe rwendo kuNormandy.
Kupedza, kufamba muEurope kunogona kuva mukana unodhura kwazvo. Normandy, Cinque Terre, Vienna, Eger, kushandiswa, Cologne, naCesky Krumlov, vari 7 inokwanisika nzvimbo dzekufamba muEurope. Matipi edu achakuchengetedza kubva pakushandisa kwako kweupenyu-kuponesa pazororo rimwe chete uye kuve nechokwadi chekuti une rwendo rusingakanganwike uye rwakakosha.
pano pa Save A Train, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
Unoda kuti embed yedu Blog pambiru “7 Most Affordable Places To Travel In Europe” into your site? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)